Taliska Milatariga oo sheegay in ay ogyihiin halka uu joogo Muqtaar Roobow Abuu Mansuur « AYAAMO TV
Taliska Milatariga oo sheegay in ay ogyihiin halka uu joogo Muqtaar Roobow Abuu Mansuur
922 Views Date February 2nd, 2014 time 11:10 am
Taliska Ciidanka Milatariga Soomaaliya ayaa ku hanjabay in dhawaan howl galo ay kula dagaalamayaaan Dagaalyahanada Hubeesan ee Al-Shabaab ka sameyn doonaan Gobolada Baay iyo Bakool.
Taliyaha qeybta 60-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibraahim Yarow ayaa sheegay in Xaalada amaan ee Gobolada Baay iyo Bakool ay xiligan tahay mid wanaagsan , waxa uuna intaa ku daray in Al-Shabaab mararka qaarkood ay soo qaadaan weerarro dhuumaaleesi ah.
Taliyaha ayaana ku hanjabay in dhawaan Xarakada AL-Shabaab ka ciribtiri doonaan Gobolada Baay , Bakool iyo Gedo, waxa uuna intaa raaciyay in ay wadaan diyaar garaw dagaal ay ku doonaan in Al-Shabaab kaga saaraan Goboladaasi.
General Ibraahim Yarow ayaa dhinaca kale ka hadlay Xaalada Hogaamiye Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur oo kamid ah Saraakiisha sar sare ee AL-Shabaab oo la rumeesan yahay in uu kusugan yahay deegaano katirsan Gobolada Baay iyo Bakool.
Taliyaha ayaa xusay in ay la socdaan Deegaanka uu Rasmi ahaan hada ku sugan yahay Sheekh Muqtaar Roobow, lana socdaan dhaq dhaqaaqiisa iyo Ciidamada uu wato , waxa uuna tilmaamay Taliyaha in ay dhawaan halkaasi ka sameyn doonaan Howlgal qorsheesan .
Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa fikir ahaan isku khilaafay Amiirka ugu Sareeya Al-Shabaab Abuu Zubeyr, waxaana xiligaa waxii ka dambeeyay warkiisa la waayay Abuu Mansuur oo la rumeesan yahay isaga iyo ciidamo ku heeb ah in ay joogaan Deegaano katirsan Gobolada Baay iyo Bakool.
Dowlada Soomaaliya ayaa marar badan ku hanjabtay in Al-Shabaab gabi ahaan ka saari doonaan Deegaanada iyo Degmooyinka ay kaga sugan yihiin Gobolada Koonfureed ee Soomaaliya .